उपचार नपाउँदा बिरामीको बिचल्ली १ फोटो छ । – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
उपचार नपाउँदा बिरामीको बिचल्ली १ फोटो छ ।
२०७१ चैत्र १९, बिहीबार ०१:३३ गते
डा. केसी बचाउ आन्दोलन
भरतपुर । भरतपुर अस्पतालको ओपीडी भवनअगाडिको रुख मुनि कुमरोजका एक परिवार भेटिए । ५७ वर्षीय श्रीमान् विक्रम महतोलाई उच्च ज्वरो आएपछि श्रीमतीको सहारा लिएर उनी उपचार गर्न भरतपुर अस्पताल आएका हुन् । उपचार नपाएपछि भवनअगाडिको एउटा रुखको फेदमा उनीहरु चैत महिनाको चर्को घामको कुनै प्रवाह नगरी सुतिरहेका थिए । उनका छोरा सात वर्षका विशाल पनि ज्वरोकै कारण मलिन अनुहार बनाएर बसिरहेका थिए ।
डा. गोविन्द केसीको मागलाई समर्थन गर्दै चितवनका डाक्टर र अन्य स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित हुँदा महतो परिवारले उपचार पाउन सकेनन् । महतोजस्ता हजारौं बिरामीहरु डाक्टरहरुको आन्दोलनले गर्दा उपचारबाट वञ्चित भए । एकातिर बिरामी भएर अस्पताल धाउनुको पीडा, अर्कोतिर अस्पताल आइपुग्दा पनि उपचार नपाएर रोग बोकेर फेरि घर फर्कदा झन् ठूलो पीडा ।
अस्पताल दस बजे खुल्छ र उपचार गरेर घर फकौँला भन्ने महतो परिवारको आशा डाक्टरहरुले सोही भवनअगाडि जम्मा भएर चर्को स्वरमा नाराबाजी गर्न थालेपछि निराशामा परिणत भयो । उपचारका लागि निजी अस्पताल जान उनीहरु आर्थिक समस्याले नसक्ने अवस्थामा रहेछन् ।
बिरामी विक्रमले भने, ‘गाउँकै मेडिकलमा उपचार गराउँदा निको नभएर यहाँसम्म जसोतसो आएका हौँ, यहाँ आइपुग्दा उपचार हुँदैन भनिदिएपछि मरेतुल्य भएँ ।’ महतो परिवारजस्तै बुधबार अस्पतालमा आएर उपचारबिना घर फर्कने बिरामीहरु प्रशस्तै भेटिन्थे ।
उमेर ८२ वर्ष पुगेका दिव्यनगरका मेघबहादुर विक पनि त्यही भवनअगाडि भेटिए । टिकट काउण्टरतर्फ हेर्दा खासै मानिसको भीड रहेनछ भनी गेटबाट छिरेका उनी टिकट घरनेर आइपुग्दा आकाशबाट खसे झैँ भए । आफन्तको सहारा लिएर हात दुख्ने समस्याबाट निको हुन आइपुगेका उनी झनै चोट खप्न बाध्य भए । भर्खरै झरी परेर उर्वर बनेको माटोमा खेती किसानी गर्ने समय छोट्याएर उनी हात जाँच्न आइपुगेका रहेछन् । तर अस्पतालमा आइपुग्दा उपचार नपाउने भनिएपछि उनी निराश मुद्रामा केहीबेर टिकट घरतर्फ एकोहोरो हेरिरहे ।
भरतपुरको सरकारी अस्पतालमात्र होइन, भरतपुरमा रहेका केही निजी अस्पतालहरुले पनि हिजो बुधबारबाट ओपीडी सेवा बन्द गरेपछि बिरामीहरु समस्यामा परेका छन् । मेडिकल क्ष्ोत्रमा पनि राजनीति गरेर बिरामीको भविष्यमा खेलवाड गरेको भन्दै केही बिरामी र आफन्तले आन्दोलनमा उत्रेका स्वास्थ्यकर्मीको आलोचना गरे । औषधी उपचारजस्तो अत्यावश्यक सेवामा खेलवाड गरिएको भन्दै उनीहरुले बिरामीको मर्कालाई ध्यानमा राखी उपचार थाल्न चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरे ।
यसैबीच, डा. केसीको माग सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ चितवनको आयोजनामा बुधबार बिहान भरतपुरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ । भरतपुर अस्पतालबाट निकालिएको विरोध ¥यालीले भरतपुरका विभिन्न क्षेत्र परिक्रमा गरेको थियो । ¥यालीमा उनीहरुले सरकारको लाचरीपनको विरोध गरेका थिए ।
स्वास्थ्यजस्तो अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा पनि आन्दोलन गरिएको भन्दै केही मानवअधिकारकर्मीले आन्दोलनको स्वरुप फेर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै चितवनलगाएत देशभरका सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाका आकस्मिक सेवाबाहेक सबै सेवा ठप्प भएका छन् । ४८ घन्टाभित्र पनि माग पूरा नगरे ओपीडी मात्र नभएर आकस्मिक सेवा पनि बन्द गरिने नेपाल चिकित्सक संघले चेतावनी दिएको छ । यसअघि डाक्टर केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउ“दै डाक्टरले हातमा कालोपट्टी बा“धेर सेवा दि“दै आएका थिए ।
१. उपचारको पर्खाइमा भरतपुर अस्पतालको ओपिडी भवनअगाडि रहेको रुखको पेटीमा सुतेका कुमरोजका विक्रम र साथमा उनकी श्रीमती र छोरा ।
२. भरतपुर चौबीसकोठीमा नारा जुलुस गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु ।